प्रचण्डलाई आलु कोसेली ? कोसेली दिनुमा ठूलो कारण लुकेको छ ! - krishipost.com
प्रचण्डलाई आलु कोसेली ? कोसेली दिनुमा ठूलो कारण लुकेको छ !
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा आलु कोशेली पुगेको छ । रामेछापमा उत्पादन भएको आलु प्रचण्डको घरमा कोसेलीका रुपमा पुगेको हो । दोरम्बा शैलुङ्ग गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कृशला घिसिङले खुमलटारमा पुगेर प्रचण्डलाई आलु कोसेली दिएकी हुन् ।